Cofttek छात्रवृत्ति - Cofttek पूरक।
सबैजना ठूलो क्यारियर र शिक्षा चाहन्छ जुन उनीहरूलाई टाढा जान मद्दत गर्दछ। यद्यपि धेरै मानिसहरूले आफ्नो क्यारियर र शैक्षिक लक्ष्यहरू वर्षौं बर्ष छोड्नु पर्छ। कफटेकलाई थाहा छ कि उचित शिक्षा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ, र त्यसैले हामी हाम्रो समीक्षा र सिफारिसहरूको साथ डाइटरी सप्लीमेन्टहरूमा हाम्रा पाठकहरूलाई शिक्षा दिन मद्दत गर्दछौं।
हाम्रो Cofttek छात्रवृत्ति एक नयाँ पदोन्नति हो जुन हामी घोषणा गर्न धेरै गर्व गर्छौं। यो २००० डलर वार्षिक छात्रवृत्ति हो जुन विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक र क्यारियर सपनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो छात्रवृत्ति प्रत्येक विद्यार्थीलाई शैक्षिक खर्च भुक्तान गर्न सहयोग पुरस्कृत गरिनेछ। हामी अर्को वर्षको लागि छात्रवृत्ति को राशि दोब्बर देखिरहेका छौं।
छात्रवृत्ति कति हो?
यो छात्रवृत्ति संग एक छात्र प्रदान गर्दछ $ 2000 शिक्षा खर्चको लागि तिर्न। यो एक शिक्षण-मात्र छात्रवृत्ति हो र कुनै पनि नवीकरणीय छैन। यो वित्तीय कार्यालयमा पठाइनेछ।
हामी एक विद्यार्थीको खोजी गरिरहेका छौं जुन हामीले प्रस्ताव गरिरहेका रकमहरू साँच्चै प्रयोग गर्न सक्दछौं। ग्रेजुएट र स्नातक विद्यार्थीहरू लागू गर्न सक्दछन्, जब सम्म तिनीहरू स्नातक स्कूल वा मान्यता प्राप्त कलेजमा पूर्ण समय भर्ना हुन्छन्। छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिन न्यूनतम GPA (ग्रेड पोइन्ट औसत) is. is छ
तपाइँ कसरी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ
तपाई सजिलै छात्रवृतिको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो योग्य हुन को लागी आवेदन गर्न को लागी सरल हुन को लागी डिजाइन गरिएको हो। केवल सीमित संख्यामा विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्, र केवल एक विद्यार्थीले जित्न सक्नेछन्।
तपाइँ कसरी आवेदन गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ छ:
"आहार पूरक पहिले भन्दा बढी लोकप्रिय प्रयोग" को बारेमा 500०० शब्द वा बढि निबन्ध लेखेर सुरू गर्नुहोस्। तपाईले पूरा गर्नु भएको पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र विस्तृत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले कसरी तपाईंको कौशलता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। निबन्ध पेश गर्न आवश्यक छ डिसेम्बर 31st, 2020.
तपाईंले आफ्नो आवेदन पठाउनु पर्छ [ईमेल सुरक्षित] निश्चित गर्नुहोस् कि यो माइक्रोसफ्ट वर्ड ढाँचामा छ। तपाईको शैक्षिक (edu) ईमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंले पिडिएफ वा गुगल कागजातमा अनुप्रयोग सबमिट गर्नुभयो भने, यो स्वीकारिने छैन।
पेश गर्ने फारमले निम्न जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ: तपाईंको नाम, फोन नम्बर, तपाईंको विश्वविद्यालयको नाम र तपाईंको ईमेल ठेगाना।
निबन्ध तपाइँको आफ्नै शब्दमा लेख्नुपर्दछ र पाठकको लागि मूल्यवान हुनुपर्दछ।
कुनै चोरी चोरी तपाइँको पेश्की तुरून्त तुरुन्त अस्वीकार हुनेछ।
केवल माथि जानकारी प्रदान गरिएको जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईंको निबन्ध यसको रचनात्मकता, सोचविचार र मूल्यमा इन्साफ गरिनेछ।
प्रत्येक प्रस्तुतीकरण म्यानुअली समीक्षा गरिन्छ र जनवरी १ 15, २०२१ मा, विजेताको घोषणा र ईमेल द्वारा सूचित गरिनेछ।
हामी निश्चित गर्छौं कि विद्यार्थीहरूको लागि कुनै व्यक्तिगत जानकारी साझा गरिएको छैन, र सबै व्यक्तिगत जानकारी आन्तरिक प्रयोगको लागि मात्र राखिएको छ। हामी कुनै पनि कारणको लागि तेस्रो पक्षहरूलाई कुनै पनि विद्यार्थी विवरणहरू प्रदान गर्दैनौं, तर हामी हामीलाई चाहिएको कुनै पनि तरिकामा हामीलाई पेश गरिएका लेखहरू प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छौं। यदि तपाईं कोफ्ट्टेकमा लेख बुझाउनुहुन्छ भने, तपाईंले हामीलाई सामग्रीमा सबै अधिकारहरू प्रदान गर्नुभयो, सामग्रीले मालिकको सामग्री सहित। यो सत्य हो कि तपाईंको प्रस्तुति विजेताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ वा छैन। Cofttek.com प्रकाशित फिट र यो उपयुक्त मानिन्छ रूपमा प्रकाशित हुन को लागी प्रस्तुत सबै काम को उपयोग गर्न अधिकार राख्दछ।